wacdinnaa Masiix, Tus ka Nasahanyahay — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Sheegista dadka wax Ciise ku saabsan u muuqataa in ay noqon mid ka mid ah kuwa wax oo dhan oo naga mid ah la ogaado waxaan u baahan nahay in la sameeyo, weli oo dhan oo naga mid ah danbi ka dareemin ma ku filan samaynaya. Waxaan xaq u ahay? Laakiinse keligay baan gooni anigaa ku jira in? Xitaa kaliya isbuucaan ee la soo dhaafay, Waxaan dareemayey xukumay sababtoo ah xiriir Waxaan bilaabay inuu wax dhiso iyadoo mid ka mid ah deriskayga ayaa noocee ah ay bilaabeen in ay iska dhici. Anigu ma aan ahayn sidii ula kac ah sida waa in Waxaan ku saabsan dhismaha on xiriirka in, iyo sii wadaan inay isku dayaan in ay isaga u sheegi ku saabsan Ciise. Oo waxay u egtahay waxaan dareemayaa sidan inta badan. Su'aasha aan doonayo in aan ka codsan waa sababta? aragtida Maxaa wadnaha loo baahan yahay in la hagaajiyo? Waxaan u baahanahay inaan maankayga in la cusboonaysiin. Anigu waxaan leeyahay in la xasuusto sababta aan u sameynayo.
Shaki kuma jiro in wacdinta waa cabsi iyo walaac adag oo Hadda waxaa jira. Iyo in kaliya waxa on qalbiyadeenna. Maxaa ku saabsan sida kuwa kale dareemaan ku saabsan? Isku dayga in uu ka dhaadhiciyo qof oo ay dembilayaasha u baahan Badbaadiye ah iyo in Ciise tahay waa jidka keliya, u muuqataa sida dambiyada ugu xun caalamka in dhaqankeena "dulqaad". Waa weerar.
Sidaas sababta waa in aannu kugu wacdinno Injiil? Waxaan furi afkooda iyo qofna doonayo inuu taas waxaa maqli. Dadka waa ina nebcaan, waayo,. Dadka waxa ay dhahaan waxaan tahay dambeeya wakhtiyada. Dadka waxa ay dhahaan waxaan ku dhagno buug gaboobay dhacsan fikradaha dhacsan. Waxaan ku noolnahay mugdiga ah, dunida colaadeed. Sidaas sababta? Ma waxaan lumin waqtigeena
Waxaan TGS garanayo sababta aan u sameynayo, ama waxaan ku siin doonaa. Ma waxaan ku wacdiyaya Injiil si aan qasbi karo qof walba in ay nala mid ah? Ma sababtoo ah waxaan nahay kuwa bigots qabaa inaan joogno ka fiican tahay dadka kale? Ma sababtoo ah waxaan oo dhan u baahan tahay nooc ka mid ah rajo in ugu cuslaataan oo Ciise ku samayn doonaa? No. Waxaan dadka injiilka ku wacdiyo, maxaa yeelay waxaan rabnaa dad si ay u arkaan ammaanta Ilaah. Oo waxaynu aragnaa ammaan in Wiilkiisa.
Haddii aad iska leh hal wax ku socdaan ha noqoto in. Waxaan ku wacdinnaa Masiix oo sidaas dadka u arki karaan ammaan.
Waa maxay sababta waa sidee?
qabatimay daroogada heli sare, maxaa yeelay, iyagu ma ay haleelaan ammaanta Ilaah. Heesaa caayo magiciisa, iyo isku heer ah Ciise, maxaa yeelay, iyagu ma ay haleelaan ammaanta Ilaah. nacasiin Young in bulshada kasta oo kale oo ku soo gani, maxaa yeelay, iyagu ma ay haleelaan ammaanta Ilaah. Mudanayaal Young Eebehoodna tala saarta xiriirka sababtoo ah ma haleelaan ammaanta Ilaah. dhalinyarada niyad ay naftooda dilaan sababtoo ah waxa ay leeyihiin rajo lahayn, maxaa yeelay, iyagu ma ay haleelaan ammaanta Ilaah. Dadka naar maxaa yeelay, iyagu ma arag ammaanta Ilaah Injiilka iyo isku halleeyey Masiix. Maxaa yeelay, ammaanta Ilaah arrimaha, oo waxaan ka doonaynaa in ay u arkaan.
Marka aan ka heli soo bidhaamaysa ammaanta Ilaah oo Masiixa, waxaan marnaba isku mid noqon doonaa. Bal aan ka fekero waxa ay tahay si loo caawiyo dadka ku arki ammaanta Ilaah dunida mugdi ah, halkaas oo dadka xitaa ma doonayo in aan isaga la ogaado.
Rasuul Bawlos wuxuu ogaa waxa ay ahayd sida in ka mid ah dadka u adeegaan, kuwaas oo isaga iyo Injiilka isaga oo u nebcaaday. Waxaan marar badan ku fikira in Paul waa meel fadhiya xeebta cagihiisa ilaa philosophizing la tahay sida uu qoray warqado, kuwaas oo. No, Paul nool dunida dhabta ah dhibaatooyinka dhabta ah - caalami ah in ay ahayd in siyaabo badan oo wax badan way ka adag tahay annagaa. Oo warqad this qoran tahay macnaha in.
Paul ee warqaddan labaad oo kaniisadda Korintos waa siyaabo badan oo daafaca ah iyo sharaxaad of wasaaraddiisu in wajiga of mucaaradka. Noqda ii raacaysaa 2 Corinthians 4:1-6.
Sidaa darteed, isagoo wasaaradda this by naxariista Ilaah, waxaan ha qalbi jabin,. 2 Laakiin waxaannu diidnay Dulleeya, siyaabo underhanded. Waxaan diidi in ay ku dhaqmaan lagu daabacay ama in la furto iyadoo ereyga Ilaah, laakiin by bayaankan soo furan runta ah waxaan ku amaanayaa lahaa nafteena in qof walba niyada in Ilaah hortiisa. 3 “Oo xataa haddii aannu injiilka daboolan yahay, daboolan yahay kuwa lumaya. 4 In ay dhacdo in ilaah dunidan ayaa indho tiray maanka kuwa gaalada, si ay u sii ka arkaya iftiinka injiilka ee ammaanta Masiix, Isagu waa suuraddii Ilaah. 5 Waayo, waxa aan qudhayadu idinkuma wacdinno wax, laakiin Ciise Masiix oo Rabbiga, nafteena la ah addoommadiinna Ciise aawadiis. 6 Waayo, Ilaah, kuwaas oo uu sheegay, "Iftiin ha ka ifo gudcur,"Qalbiyadeenna uga ifay inuu iftiinka aqoonta ammaanta Ilaah wejiga inaga siiyo Ciise Masiix. (2 Corinthians 4:1-6)
Haddii aad tahay qof Mu'min ah Injiilka, aad loogu yeedhay wasiir ee Injiilka noqon. Sidaas waxaan doonayaa in aan eegno tusaale ahaan Bawlos iyo waxaan doonayaa in aan farta afar casharada wasaaradda dunida mugdi ah
waxaan. Ha Waiver Sababtoo ah Diidmo ee Ragga (1-2)
Diidmada adag tahay. Waxaan oo dhan ayaan u soo maray. Waa caadi in dadka u kala jabi doono, oo ay wax yeelaan, marka ay bixiyaan naftooda qof ama wax kale oo qofka iyaga u soo jirsado. From wiilasha fasalka toddobaad weydiinaya gabar inay qoob a, in aan samaynta ee kulliyadda in aad codsatay in ay, si aan helitaanka shaqo ah in aad si ba'an u doonayay, diidmada waa adag.
Rasuul Bawlos wuxuu la macaamilooday badan oo diidmada iyo mucaaradka in wasaaraddiisu ee Injiilka. Sidaas badan si ay in badan oo ka mid ah waraaqaha uu uu ku qasbay si ay u difaacaan dabeecadiisa iyo hababka iyo kuwiisii ​​fariin. Uu xaaladda lama waxanse.
Ma qiyaasi kartaa isagoo booska Paul ee? Waxaad u tagtay Korintos, Meeshan sanamka jaahilka, oo aad ku wacdiyey Injiilka iyaga. Waxaad iyaga u jeclaatay. Laakiin hadda, duwaan qaar ka mid ah ayaa lagu beeray abuurka ah ee shaki, oyna. Shaki adiga kugu saabsan, iyo ujeeddooyinkaaga, iyo waxbaridda. Taasi dhaawacdaa.
Laakiin sidee Paul jawaab? Eeg aayadda 1.
“Sidaa darteed, isagoo wasaaradda this by naxariista Ilaah, ma waxaan ku qalbi jabin.”
A. Ha Waayaya Heart
Paul ayaa sheegay in uu uusan qalbi jabin. Waxa uu sheegay inuu ka qalbi jabine inkastoo xaqiiqda ah in uu soo wajahay mucaaradka sida. Ma uu helay niyad, oo waxaa la siiyey ilaa, oo Tuuri shukumaan ama wax kale si uu naftiisa u siin in ay heleen. Wuxuu ma ka fariistay oo go'aansaday in ay noqdaan sixirroow halkii. Waa kuwee waa mid cajiib ah, fiirsaneysa waxa diidmada oo intaasu waxay ahayd sida. Marka la eego wax walba Paul mareen. From la xidhay, dhagxiyey, diiday. Paul weli ma qalbi jabin; taas oo dhab ahaan waxa aannu la jirrabay lahaa in ay sameeyaan.
Weligaa ma wadaago Injiil qof oo lahaa iyaga ka gaalowdaan? waxaan leeyahay. Waxaan qabaa karaa jeer marka dadka ayaa sheegay in ay u baahan tahay ma Ilaah, ama ku dooday ila iyo ii sheegay, Ilaah ma ahaa dhabta ah, ama dadka ay bilaabeen in ay u dhaqmaan cajiib ah oo iga fogaato ka dib waxaan iyaga la wadaago, xataa dadka qalafsan codkoodiina way igu iyo iga hanjabay. Sidee idin jirrabay in ay ka jawaabaan in? Waxaa laga yaabaa in la jirrabay lahaa aad si ay ula dagaalamaan, laakiin ma waxaan u dagaalami karnaa. Inta badan oo naga mid ah la jirrabo lahaa in aan la niyad jabin, iyo quusan. Yaa doonayo in uu sii socda galay derbiga leben ah?
Sidaas daraaddeed markii aan akhriyey erayadii Bawlos ku yidhi uusan qalbi jabin. Waxaan ahay yaabeen. Waxaan doonayaa in aan ogaado sida wuuna sameeyaa. Waa maxay sababta ma uu qalbi jabin? Waxa uu xaq u leeyahay halkan waxa uu inoo sheegayaa in aayaddan.
Paul ma qalbi jabin, sababtoo ah weynaanta wasaaradda in Ilaah isaga siiyey. Xuquuqda hor this cutubkii 3, Paul farabadan of time sharxaya ammaanta wasaaradda Axdiga Cusub kharash gareeya. ammaantii isagoo mid ka mid ah kuwa dhinacan iskutallaabta, qaata inuu wax ku wacdiyo badbaadada nimco xagga rumaysadka ee Ciise.
Paul ayaa dhiirigelin ka timaada wasaaradda laftiisa, sida guul ma uu dareensan yahay waqti kasta la siiyaa. Waxa uu ugu mahad celinayaa Waxa uu doortay by naxariista Eebe si ay ugu adeegaan hab this. Waxa uu dareensan yahay Shafar. Dhab ahaan, uu ka soo tilmaamay in tani ay wasaaradda axdiga cusub waa xitaa ka ammaan badan wasaaradda axdiga jir Muuse. Markaasaa Bawlos wuxuu og yahay in ay tahay naxariis Ilaah inuu dadka oo dhan waxay leeyihiin lahaa adeegiddan. Ninka la neceb yahay kiniisadda iyo silcin Nasaarada.
Sida dadka Ilaah, farxaddiinnu aan ku saleysan sida ay dadka uga jawaabaan farriinta. Our kalsooni Injiilka aan ku salaysan sida dadka oo xaafadanada ku jawaabaan in ay. Waxaa ku salaysan ammaanta yeedhista keligeed.
Waa la aamini karin in dadka qolka this qayb wasaaradda a qaadan ka ammaan badan wasaaradda Muuse qudhiisu. Ma waxaad u garanaa in? Sababtoo ah ma aha oo kaliya ha ma fiicna arki, laakiin waxaan ka heli in ay u sheegaan oo ku saabsan Mid ka mid ah waa kuwa. Waan ognahay cidda mid. Waxaan aad u hesho si ay u caawiyaan dadka u arkaan, ammaanta Ilaah ayaa soo bandhigay! Waxaan u hesho in ay keeni dadka Ilaah hortiisa.
Masiixiyiinta ah, waxaan waa in aan qalbi jabin. Waxaan ula jeedaa ma in aan waa in aan la caloolxumaaday gudcur ah oo dunida. Waxaan ula jeedaa kaliya in aan waa in aanay noqon Quusta iyo tuur tuwaalka. Waxay diidi karaan farriinta, laakiin in uusan u sameeyo wax ka yar ammaan badan.
Ha dhaafitaanka. Ha qalbi jabin.
B. Diid Dulleeya Underhanded Siyaabaha
“Laakiin waxaannu diidnay Dulleeya, siyaabo underhanded.”
Paul ayaa laga yaabaa in lagu eedeeyay in ay wasakh iyo is-raadinta. Dabeecaddiisa ayaa yimid su'aasha. Haddaba Bawlos qudhiisu wuu Daafacaa, oo wuxuu ku yidhi, "Maya, waxaan diidnay in. Waxaan ma qarinaya wax oo isagoo dhareer in habka aan ku shaqeeyaan. "Waxa uu doonayaa inay ogaadaan inuu doonayo inuu ku noolaado hab istaahila in Injiil.
Waxay arrintu u muuqataa badan sida waxa uu sheegay in 2 Corinthians 2:17, "Si ka duwan aad u badan, mayno eraygii Ilaah ma garaaca durbaanka faa'iido. Taas lidkeeda, in Masiixa Ilaah hortiisa waxaannu la daacadda hadlo, sida dadka ka Ilaah laga soo diray.”
Paul fahamsan yahay in dalabka wasaaradda Injiil si aynu ugu noolaanno nolosheena si gaar ah. Oo markii aannu ma samayn u dhimeysa our wasaarada. Waxa uu fahamsan yahay in aynaan ka naadi karaa Injiil, iyo dadka si ay u toobad keenaan dembiga u sheeg, aan ku nool nolosha ka mid ah nafteena toobad.
fiiri, haddii aad dadka la wadaago Injiil, laakiin kuwa dadka isku arki noloshaada waa daadsanaanta, shaqada tahay ka gees ah Injiil. Waxay tahay fikirka Injiilka waa in aanay noqon sida awood badan sida ay tiri ay tahay, waxay qasan ama uu qasan.
C. Ha iskhiyaanaynina ama loo furi Iyadoo Ereyga Ilaah
Paul ayaa sheegay in ka dibna, "Waxaan diido in ay ku dhaqmaan lagu daabacay ama in la furto iyadoo ereyga Ilaah." Ama sida NIV ka geliya, "Waxaan ha isticmaalin khiyaano, mana aannu u xumeeyaan ereyga Ilaah.”
Paul ayaa sheegay in, uu diido in uu noqon khaa'inka ama qasan la Ereyga. Waxa uu weli difaacaneysa qaabka uu u shaqeeyo. Paul MA wax tampers ama isbeddel ama biyo erayga Ilaah ku samayn doono. Malaha waxaa u muuqataa sidii wax cad, laakiin waa run ahaantii ma si cad.
Waxaan jeclaan lahaa wacyigaliyo ka badan maanta waxay leeyihiin lahaa go'aanka this, ma si ay u xumeeyaan Ereyga Ilaah. Waxaa nacasnimo aad u badan waxaa. Marka aad ka fikirayso waxa kaniisad waa in aad qayb ka mid ah noqon, loo hubiyo in ay ku wacdiyi jiray Ereyga. Hubi in ay aan ku daray ama ka. Dad aad u badan ayaa magac ka dhisteen waayo baddalayso Ereyga Ilaah. Paul ayaa isagoo u yeeli maayo.
Waan ogahay mararka qaar oo dhan oo naga mid ah la jirrabo si ay u sameeyaan in kastoo. Ma aha in aad u noqon wadaad ama wax wacdiya TV si ay u xumeeyaan Word ah. Maxay yihiin qaar ka mid ah siyaabaha aad la jirrabay laga yaabaa in ay faraha la Injiil? Samaynta in ay u muuqato in ka badan fudud? Ma hadalka ku saabsan dembiga? dadka ididiilo wax Ciise uma yabooho?
Waa nooc ka mid ah sida tan. Weligaa ma la fadhiyey martiqaadkii ama wax oo aad cunto u fadhiiso oo qaadan kabasho ah oo shaaha qabow, waana littir? Ha idinma nebcaan in? Waa maxay sababta shaaha baraf littir xitaa jira? Qofna ma jecla in. Sidaas Sidee baad u dhaqmaysaa, aad qaadato sida 18 baako oo sonkor ah iyo isku day in aad u macaan ka dhigi, maxaa yeelay, shaaha littir waa buray.
Sidaas oo la mid ah, dadka arki Injiilka sida la hollin, ma macaan ku filan oo ay ku hari dhadhan dadka. Sidaas daraaddeed waxay ku dari in ay. Waxay ogaado inta ay ma gebi ahaanba laga takhaluso waxaa ka mid ah waa wax fiican. kaliya ay doonayaan in ay isku daraan wax kale ee waxaa la, si ay u sameeyaan dadka waxaa sida dheeraad ah. Tani waa wax aad u xun in la sameeyo! Oo waxay shaaca ka qaaday sida aad si dhab ah u arki Injiil.
ma dareemaan baahida loo qabo in la furto wax Waxaad ilaa aad u maleynayaa in cilladaysan ama aan ku filnayn. Isku day kasta oo qasan hareeraha la Ereyga Ilaah waa weerar isaga iyo jidka in uu badbaadiyay.
D. Gobolku xaqa cad ha Waxaa Kalidaa Istaag
“Laakiin by bayaankan soo furan runta ah waxaan ku amaanayaa lahaa nafteena in qof walba niyada in Ilaah hortiisa.”
Injiilka waa ku filan. runta Caddee bayaan iyo muuqaalba, raacsiiyana. Waxa aanu samayn cid kasta oo wanaagsan si ay u khayaanaan iimaanka anfici. Ku darista si dhab ah soo saarta inay kasaan; mana ku soo saarto. Haddii qof dumar ah oo uu leeyahay waji qurux badan, sababta ay u daboosho xijaab la? Waxa aanu ka dhigi iyada more soo jiidasho leh; qarsado quruxdeeda run. Ha isku dayin in ay ku riday ka samaysan on Injiil sidaasay ahaan doontaa cute. waxa ha dabacsan in sharafta dhabta ah ee Masiixuna waa ku iftiimin lahaa iyada oo loo marayo.
Xitaa ku dhex diidmada, ma inaannu dhaafitaanka. Waa in aynaan ku nool jid horjeedda fariinta, oo waa inaanan ka aan beddeli fariin in ay isku dayaan in ay dadka u sida. bayaan Waa in aan ku wacdiyaan Ereyga Ilaah, maxaa yeelay, waxaannu doonaynaa in ay arkaan ammaantii Ilaaha runta ah.
Laakiin ma ahan si fudud. Sidaas inta badan waxa ay u muuqataa sida ay kaliya ma heli.
II. Iska Work Shayddaanka
Waxaan u baahan nahay in laga war hayo sida Shaydaanku shaqeeya. Waxaa jira qalad badan oo isaga ku saabsan. Dadka qaar si xad-dhaaf ah ka fikirida tago si aan Shayddaanku asal ahaan waa dhan awood. Wax kasta oo ay taasi dhacdo waa natiijo xooggiisa weyn, oo uu sameyn karo wax kasta oo uu doonayo in mar kasta oo uu doonayo in uu u samayn. Markaas waxaa jira qaar ka mid ah kuwaas oo taga si xad-dhaaf ah oo kale. Waxay aaminsan yihiin in been Shaydaanku labada kajirin ama in uu awood iyo firfircoonayn. Labada of dhinacada kuwanu waa been iyo ay khatar yihiin, waayo noo rumeeyey.
Runtu waxa ay tahay Shaydaanku wuu leeyahay awoodda, xoog ku filan in uu u shaqeeyo Paul iyo wasaaradda ka dhanka ah. Dhegayso Aayado saddex iyo afar.
“Oo xataa haddii aannu injiilka daboolan yahay, daboolan yahay kuwa lumaya. In ay dhacdo in ilaah dunidan ayaa indho tiray maanka kuwa gaalada, si ay u sii ka arkaya iftiinka injiilka ee ammaanta Masiix, kuwaas waa image Ilaah.”
A. Qaar ka mid ah Ha Eeg Injiil
Waxa ay u muuqataa in mid ka mid ah dhaleeceeynta Bawlos ka gees ah ayaa la sheegay in uu fariin uu ka qaarkood qarinayaan, in uu hayo dadka qaar ka arkaan. jawaab Paul waa, haddii fariinta waa ka qarsoonaa, waxaa ka mid ah kuwa la hayaa Qarsoona. Taasi micneheedu waa maxay?
Bawlos waxa uu ku yidhi dadkii ma uu arki karaa run sheegnimada farriinta ay yihiin dad la mid ah kuwa lumaya. Tani waa cad in 1 Corinthians 1:18 marka Paul ayaa sheegay in, "Fariin ku saabsan iskutallaabtu waa u nacasnimo kuwa lumaya…" Waxa ay u muuqataa doqon iyaga. Ma jiraan dadka qaar ka mid ah meel la hortiisa ruuxiga ah, kuwa ku noolahay rumaysadka ee ballan qaadyada Ilaah, kuwa dhaxli doonaa nolosha weligeed, oo sidoo kale qabaa Injiil waa doqon. dadka kuwa aan ka jirin.
Wuxuu ciqaabi doonaa kuwa aan Ilaah aqoon iyo ha injiilka Rabbigeenna Ciise aan addeecin. Waxaa lagu ciqaabi doonaa halaag weligiis ah oo Rabbiga hortiisa ka iyo haybadda xooggiisa maalintii uu yimaado in isaga lagu ammaano uu dadka quduuska ah iyo in la yaabeen ka mid ah kuwa rumaystay oo dhan ka saaro. (2 Tesaloniika 1:8-10a)
Tani ma aha ciyaar in aan u ciyaarno. Wasaaradda Tani waa nolosha, ama dhimashada wasaaradda a. Kuwa ka gaaloobay Quraanka this ee Injiilka, Gaaloobayna. Oo kuwa Gaaloobayna isaga halligmi doonaan, oo weligiin baad cadaabay.
B. Shaydaanku indho tiraa kuwa Gaaloobay
Laakiin sababta aan dadkan ka arki kartaa? Tani waa meesha Shayddaanku ku yimaado. Paul ugu yeedhay isaga ku "Ilaah adduunyo." Sidaas awgeed waxa cad in uu awood u leeyahay qaar ka mid ah, laakiin aan awoodda oo dhan. Waxa uu ugu baaqay ilaah dunidan ama da'da this, oo kaliya da'da this.
Haddaba sida aynu ognahay Shayddaan baa naga neceb. Kitaabka sheegay inuu prowls dhulka ku wareegsan oo raadinaya qof wuxuu cuni karo. Waxa uu cadowgu Ilaah (ma siman), iyo kan noo keentay inay aaminsan yihiin been halkii runta Ilaah. Sidaas waxa aanu Paul odhan Shaydaanku halkan ma? Paul ayaa sheegay in dadkan la hayaa, ama sidii uu iyaga ugu baaqaysaa, gaalada, iyagu ma ay arki karaan, maxaa yeelay, Shaydaanna wuu indho tiraa.
Tani waxay cadayn u ah sida la yaab leh oo ay muhiimka u tahay inoo noqon waa in si aad u aragto ammaanta Ilaah. Mid ka mid ah gool ugu weyn Shaydaanku inuu na ilaaliyo arkaan. Shaydaanku ilaa iyo haatan u dhaco sida in ay na indha si loo hubiyo, ma aannu arki kartaa ammaanta Ilaah Injiilka.
Waa maxay ammaanta Ilaah? Ammaanta Ilaah waa uu miisaanka, oo quruxdiisa, haybad, haybad, weynaanta, iyo iftiin. Sidoo kale waxa uu leeyahay badan oo la sameeyo iyada oo uu sumcad, caan ah, iyo joogitaanka dadkiisa dhexdooda.
Qaar ka mid ah oo naga mid ah u malaynayaa in goolkii ugu weyn Shaydaanku inuu noo jillaafo la Ahraamta ah ama calaamad hal il ku farshaxanka album heesaa ah. fiiri, goolkii ugu weyn Shaydaanku ma aha inay kugu khayaanaan ku biiro Illuminati la album raabka ah. goolkii ugu weyn Shaydaanku waa si aad uga maxaa yeelay, ammaanta Ilaah oo ku jira Masiix. Iyo in waxa aan doonayaa in dadka oo si aad u aragto. Shaydaanku shaqeeya inaga gees ah. Shaydaanku waa cadowgeennii iyo cadowga ah ee Jidka Masiix.
Shaydaanku ma doonaysaa inaannu ku noqon baqaa ammaanta Ilaah. Waxa uu doonayaa noo noqon filimka la guulaheedii adduunyo. Waxa uu doonayaa na in la kor u xidhxidhnaa lacag la, oo caan, iyo xiriirka kaamil ah, iyo guul. Shayddaan baa naga doonayo inuu si ku meel gaar ah ku qanacsanayn, waxyaalaha dunida, in aynaan haysan waqti si uu u eego in Ilaah la ammaano. Laakiin ma ahan ku filan isaga si ay naga mashquulin - uu si dhab ah na indho tiraa.
Ma waxaad la jidaynayey shaydaan aad indha la oo kaa hortaagin eegaya ammaanta Ilaah? Ma waxaad dooneysa ah waxyaalaha dunida this halkii ammaanta Ilaah? Haddii ay sidaas tahay, aad ciyaaro ayuu gacanta u geliyey iyo qabanayaan waxa uu naga doonayaa in uu sameeyo. Taasi waa sababta aynu sida Mu'miniinta xagga Ciise, sababtoo ah waxaan dooneynaa dadka si ay u arkaan ammaanta Ilaah, in ay ku aamini lahaa Masiix, oo Ilaah u ammaanaan la noloshooda, dadka injiilka ku wacdiyo.
Qaar ka mid ah oo naga mid ah la yaabanahay sababta ay dunida oo mugdi ah waa hadda. Waa maxay sababta dad aad u dembi badan, Neceb midkiinba midka kale, iyo cadaawad xagga Ilaah. Waa hagaag halkan jawaabta ay. Waxay indha la 'nahay. Waxaa laga yaabaa in aad la lahayn horumarka la wadaago la saaxiib ama xubin qoyska ka mid ah muddo sanado ah oo aad daasho. Waxa ay u muuqataa wax aan macquul aheyn. Waa in aynaan ka heli careysan iyo quusan on dadka. Haddii Ilaah waxaad badbaadin kartaa, Waxa uu badbaadin karo qof! Haddii Ilaah ila badbaadin karo, Waxa uu badbaadin karo qof. Waxay indha la 'yihiin, oo ay u baahan yihiin si ay u arkaan. Ka caawi inay u arkaan.
Tani waxay sidoo kale noo muujinaysaa in marka dadku ay diidaan Injiil, taas micnaheedu ma aha farriin waxaa mar dambe wax xiran badan ay ka dhigan tahay toosh waxaa xiran haddii nin indha la 'ma aragto aad u iftiimaya indhihiisa. dadka Blind ma arkaan.
Ha u ogolaan diidmada idin shaki Ereyga. Xaqiiqada ah in dad indha la 'aan ka arki kartaa sida u qurux badan Lisa Mona yahay, macnaheedu ma aha waa wax aan qurux badan. Annagu ma ku saleeyaan ra'yiga tahay our on nin oo waxba ma uu arki karin.
C. Ciise waa suuraddii Ilaaha
Paul ayaa sheegay in shaydaanbaa u indho tiraa aragto "Iftiinka injiilka ee ammaanta Masiix, kuwaas waa image Ilaah. " Tani waa sababta dadka ku wacdiyey Masiixa dadka muujinaysaa ammaanta Ilaah, maxaa yeelay, Ciise Masiix waa suuraddii aad Ilaah.
Ciise ma ahan oo kaliya nin nebi ah oo Ilaah. Wuxuu kaliya nin xagga Ilaah laga soo diray ma aha. Isagu ma aha oo kaliya oo ah Wiilka Ilaah. Isagu waa image aad Ilaah. Waa maxay tan macnaheedu? Waxaa loola jeedaa in Ciise, isagoo Ilaah qudhiisaa, Waa wakiil kaamilka ah Aabbaha. Haddii aad rabto in aad ogaato waxa jacaylka Ilaah waa sida, eegto Ciise. naxariista Ilaah? Fiiri Ciise. Ilaah Sidee dareemaan ku saabsan dembilayaal? Fiiri Ciise. Ciise waa Ilaah qaab jireed, image kaamil ah.
In abuurka arki karo waxaan arka shuqullada Ilaah, laakiin xagga Ciise Masiix waxaan leenahay Ilaah qudhiisaa, Emmanuel, "Ilaah baa inala jooga." Ammaanta Ilaah wejiga Ciise Masiix ugu dirxiga tageen yahay, maxaa yeelay, waxaad og nahay in aan kaliya waa sifooyinka Ilaah waxaa, laakiin Ilaah qudhiisu jiro. - Charles Spurgeon
Ninna ma arkin Ilaah marnaba, laakiin Ilaah kaliya, kan dhinaca Aabbahay, ayaa yaqaan isaga. (John 1:18)
Sidaas daraaddeed markii dadka fiirin karo iftiinka injiilka ee ammaanta Masiix, waxay Ilaah ku dhex ammaantaydana way arki doonaan. Shaydaanku ma rabto in ay arkaan in.
Waxaan ku wacdiyo Injiilka si dadku ma fiirin karo ammaan. Markaasaa ammaantii la arko in Ciise.
nin Markaasaa Shayddaan tiray, waxa aannu u malaynay in la sameeyo? Shaydaanku waa "ilaah dunidan." Waxa aan u malaynay in la sameeyo marka uu nooga soo?
III. Qabsanaysaa Work ee Wasaaraha
Mid ka mid ah sababaha badan oo inaga mid halgan kula wacdinta waa sababtoo ah waxaan fahmi waxa aan la baaqay in ay sameeyaan.
“Waayo, waxa aan qudhayadu idinkuma wacdinno wax, laakiin Ciise Masiix oo Rabbiga, annagoo ah addoommadiinna Ciise aawadiis la.”
Bawlos waxa uu ku yidhi, dadka ka gaaloobay aan fariin maxaa yeelay, ma ay arki karaan Masiixa. Oo Masiix yahay waxa aannu kugu wacdinno. Iyagu ma ay yihiin i diida, laakiin isaga.
A. wacdinnaa Masiix!
Sida wasiir ee Injiilka, aad leedahay mid ka mid ah hawl hoose. waxay Masiixa u naadiyaan. Waxaan aad soo galla, kolkaasuu kadeeday, iyo niyad, maxaa yeelay, waxaannu ka wax ugu weyn ee aad u hesho. U sheeg dadka oo ku saabsan Ciise.
Marka aad u soo galeen xiriir la qof ayaa laga badiyay, aan rajo, oo aan Ilaah oo aad is weydiiso waxa aad samayn lahaydeen oo. U sheeg qofka in ku saabsan Ciise. Taasi waa waxa ay u baahan yihiin. Haa ay qabaan baahiyo kale. Laakiin baahida ugu weyn waa Ciise.
Haddii aad rabto in aad si dhab ah nin si aad u aragto ammaanta Ilaah, waxaa iyaga wanaag falaa ma jiro in ay waxyaabo kale ku wacdiyaan. Hadda oo macnaheedu ma ha loo caawiyo dadka ku nool iyo sidoo noloshooda, waxa kaliya oo macnaheedu yahay Masiix ay tahay in la xarunta of in. Haddii ma aha Ciise ee waa aasaaska, dhiiranahay, shidaalka ka danbeeya wax kasta oo kale aannu kugu wacdinno, waxa aan sameyneyno ma socon doono.
Maxay ka dhigan tahay in ay dadka ku wacdinnaa Masiix? Waxaan ka ogahay xagga inta kale ee qoraalka iyo meelo kale oo Qorniinka in Paul waxaa lagu tilmaamayo farriin ku Injiil. Paul ayaa sheegay in Corinthians ee "waxaan goostay inaan waxba idinka mid ah, marka laga reebo Masiix oo iskutallaabta lagu qodbay isaga ogaan." Paul waxay ka dhigan tahay fariin ku saabsan Ciise iyo waxa uu sameeyo iyo sida uu badbaadiyay.
Haddii aad halkan u joognaa caawa oo aanad garanayn in Injiil fariin, markaas waa in aad noqon goolka ka hor inta aad ka tagto. Jaantuska waxa Injiil yahay iyo haddii aad u aaminsan yihiin. At muhimka ah ee this message Injiil, waa run in Ilaah waa quduus, ugu weyn waa dembi badan, Masiix wuxuu ahaa nin qumman oo u dhintay dembilayaal, wuxuuna ka qabriga kacay. Oo kuwa dembiga iyo kalsooni ka soo noqdaan Masiixa ku badbaadi doontaa. Taasi waa fariinta aad loo yeedhay inuu wax ku wacdiyo.
Waxaad isma badbaadin karo dadka kale. Waxaad ma dhiman karaan qof kasta. Waxba kama badeli kartid qof qalbigiisu. Waxaad ku wacdiyo karaa oo keliya Masiixa. Ha isku dayin inaad iyaga ku badbaadin, u sheeg oo ku saabsan Mid ka mid ah kuwaas oo awood. Ha isku dayin inaad qalbiyada beddelo, u sheeg oo ku saabsan Mid ka mid ah kuwaas oo awood. Ha isku dayin inaad iyaga ka nadiifi, u sheeg oo ku saabsan Mid ka mid ah kuwaas oo awood.
Maxaad Injiil? Sababtoo ah tani waa sida Ilaah waxa uu doortay dadka, markay maqlaan injiilka. Waxaa kale oo cad ka tuducdan, in ammaanta Ilaah ayaa si cad u arkay in injiilka ku saabsan Wiilkiisa.
Just todobaadkii la soo dhaafay, Waxaan maqlay laba markhaatifurkaaga ka Mu'miniinta in aan kaniisadda. Labadan qof oo lahaa sheekooyin aad u kala duwan. Mid ka mid ahaa ka ganacsada daroogada ah kii loo qufulay. Waxa kale oo ay ahayd gabar wanaagsan, oo Ilaah u nebcaaday. Labada iyaga ka mid ah ayaa Injiil wadaago iyaga la marar badan. Oo iyagu ma ay rumaysan. Oo waxaad ogaan waxa ugu dambeyntii u wareejiyey Masiixa la aamminaa,? Qof kale la wadaago Injiil iyaga la. Waxaan marna ma ogaan marka Eebe la socday in ay ka shaqeeyaan, ama sidee baa Ilaah la doonayo in ay ka shaqeeyaan. Waxaan u baahanahay inaan sameeyo shaqo. U sheeg dadka oo ku saabsan Ciise, si ay u arki karaan ammaanta Ciise.
Waayo, hubka dagaalkayagu ma aha xagga jidhka, laakiin waxay leeyihiin awood rabaani ah in la dumiyo qalcadaha. Waxaan baabbi'in dood iyo ra'yi kasta oo ay dureri kiciyey, oo aqoonta Ilaah, oo fikir kasta maxbuus uu u hogaansamo Masiix, iyagoo diyaar u ah inay ka aarsanno caasinimo kasta, markii ay addeeciddiinnu waa dhameystiran. (2 Corinthians 10:5-6)
Qaar ka mid ah oo naga mid ah waxay jecel yihiin in ay wadaagaan markhaatifurkaaga our, waxa wanaagsan. Laakiin marka Injiil ma aha hadiyad aan aan ku wacdiyey Masiixa, laakiin is. "Waxaan ahaa crackhead a, markaas anigu ma ahaa. "That's sheeko fiican, laakiin sida aan la badbaadin karaa?!! aad Haddii dhigan tahay in ama aan, in aad naftaada ku wacdiyaya. Waxaan samaynayaan wax aad u Paul ayaa sheegay in uusan samayn in tuducdan. Fadlan ha la wadaagno maragga, laakiin u sheeg News Good in aad ku badbaadi.
B. Noqo Addoonkiisa u yahay kuwa xaqa ah u Baahan
In waxa siyaabo aad la wadaago Injiil waayadan? Yaa idin la wadaago la? Maxay idinla hadlo marka aad ku fadhiisan kursiga jare ah, ama marka aad timahaaga sameeyey? Maxaad dhihi kartaa in deriska ama asxaabtaada marka aad hesho daqiiqado yar in ay ka hadlaan wax?
ereygaas tarjumay sida addoommo, macno ahaan waxaa loola jeedaa addoon. Waxa uu ku yidhi anigu waxaan naadinayaa Masiix oo Rabbiga, oo ii sida aad addoon, Ciise aawadiis. Taasi waa mid cajiib ah. Oo ma ahan markii ugu kaliya ee Paul ayaa sheegay in wax sidan oo kale.
In kastoo aan xor ahay oo iska leh, Ninna ha u, Aniga qudhaydu waxaan addoon in qof walba, inay ku guuleysato badan intii suurto gal. (1 Corinthians 9:19)
Miyaad naftaada u samaynta addoonkii kuwa baahan yihiin inay maqlaan injiilka?
Waayo, qof wax lagu maqlo lahu Injiil iga, ma u leeyihiin in ay xaaladda ugu fiican? Waxaan rajo ma aha. Waxaan doonayaa in aan noqdo ula kac ah, iyo xataa nafsaddayda carqalad in dadka kale heli lahaa in aan Masiixa la kulmo.
Qaar ka mid ah oo naga mid ah waa mid aad u mashquul. Waxaan ka shaqaynaa badan, ama aannu u adeegnaa ka dhacay kaniisad badan, oo aan weligood waqti ha la non-Nasaara. Waxaan dareemayaa sida in mararka qaarkood. Laakiin waa in aan ka tegin dadka ku saabsan Masiixa sheegaya ilaa fursad. Waa in aan dhiso nolosheena agagaarka wacdinta. Samee allabaryo u sheegto dadka kale oo ku saabsan Masiixa.
Waxaan la yaabanahay, kuwaas oo qolka this ka socda waddan kale si ay u wadaagaan injiilka? Waxaa jira dad aan wax ogayn. Waxaa jira dad waa indha la '. Aaway adeegayaashan magaalooyinka diyaar u ah inay meelo kale u tagaan?
Waxaan ku wacdinnaa Masiix, si nin Ilaah arki kartaa. Laakiin waxa barta of wacdiyaya Masiix haddii nin indha la 'yihiin?
IV. Rajaynaynaa In Work Ilaah
Dunidu hadday la wacdiyay ugu dambeyntii ku xiran noo on, waxaa macno ahaan aan suurtagal ahayn waa. Waxaan indhaha la 'ma furi karo. All aan samayn karnaa waa wacdiya iyo jacaylka iyaga on. Ma Ilaah na waydiinaya inuu sameeyo wax aan macquul aheyn ee? Waxaa laga yaabaa in.
In Falimaha Rasuullada 26:18, Ciise ayaa ku yidhi si Paul, "Waxaan kuu dirayaa iyaga, in la furo indhaha iyo gudcur uga soo jeestaan ​​oo ay iftiinka ugu, iyo xoogga Shayddaanka oo ay Ilaah, si ay helaan dembidhaaf oo ay dhaxal la helaan kuwa quduus lagaga dhigay rumaysadka ay igu in. "
Sidee waa in ay suurto gal? Man ma aan samayn karo in. Dhegayso aayadda 6.
“Waayo, Ilaah, kuwaas oo uu sheegay, "Iftiin ha ka ifo gudcur,"Qalbiyadeenna uga ifay inuu iftiinka aqoonta ammaanta Ilaah wejiga inaga siiyo Ciise Masiix.”
A. Ilaah abuurtaa iyo Recreates
Paul qaadataa labaad na xusuusinayaa kan Ilaah waa. Waxa uu rabaa in uu na siiyo waanada deg deg ah record track uu. Tani ma aha Ilaaha ah oo uu isku dayayaa in uu sameeyo wax la yaab leh markii ugu horeysay. Tani ma aha Ilaaha ah oo ku dhashay shalay ama xitaa a million sano ka hor. Tani ma aha Ilaaha ah oo la abuuray. Tani ma aha Ilaaha ah oo gacmaha ku xidhan by ilaah waxa loogu yeero adduunyo. Ilaah ayaa waxaan u socoto si ay dadka kale ka wakiil ah waa isku Ilaah, kan abuuray wax walba ka Waxba.
Haddii uu abuuri karaa oo dhan of abuurka erayo kaliya, Waxa uu keeni karaa indha la ', dad dhintay in nolosha.
indhaha Blind jiraan wax kulan Ilaaheenna ahu, waayo,. maskaxda sharka jiraan wax kulan Ilaaheenna ahu, waayo,. Quluubtooda Dark jiraan wax kulan Ilaaheenna ahu, waayo,. Waxa uu sheegay in, "Iftiin ha ahaado" mar iyo lababa wuu dhihi karaa. Taasi waa barta Bawlos ku samaynayo.
sawirka ayaa wuxuu isticmaalaa waa sida tan. quluubtanadu waxay yihiin sida qolka weyn, waa madow garoonka. derbiyada waa qaro weyn. Waxaa jira daaqadaha lahayn. Waxaa jira laambadihii lahayn. No nalalka. No albaabbadii light in hoos Socda. Dhammaan qolka this abid loo yaqaan waa gudcurka dibadda ah. Wacdin waa marka qof ka baxsan taagan qolka in gudcur ah, iyo qaylo Masiix yahay Rabbiga. Laakiin nuurka weli ma iman ma on. Waxay tagaan dhanka kale oo qaylo, Isagu wuxuu u dhintay dembiga iyo Wuu sara kacay! Weli ma nalalka. Ka dibna mar kale News isla wadaago, laakiin waqtigan kubada wrecking naxariista Eebe badneyd oo dhan iyada oo mid ka mid ah derbiyada kuwa iyo iftiinka ifka aad abid arkay dhex iftiimay. qolka Taasi mar madoobaan hadda waa sida u dhalaalaya sidii qol kasta oo weligood waxay noqon kartaa. Waxay qaadataa Ilaah inuu sameeyo in.
Christian, haddii aad soo arkay ammaanta Ilaah wejiga Ciise, haddii aad gudcurka ka soo noqday inuu nuurka, Ma aha shuqulka. Waxa aan ugu dambeyntii samaynaya qofka la wadaago aad ula. Waa shuqulka Ilaah. Kaliya Ilaah samayn karaa in. Iyada oo ah ilaaha reer adduunyo na indho tiraa ka yimid xagga ammaanta Ciise, Ilaaha runta ah oo ku nool iftiimay iftiin baa Quluubta iyo indhaha la 'indhaha laga furay. Oo wuxuu isticmaalaa Kalimadiisii ​​loo sameeyo.
Haddii aad qalbigiinna oo waxaa mar dambe madoobaan sidee muujinaya in ilaa noloshaada?
C. Raadinta At Ciise joogto Iyadoo Mahadnaqay
Miyaad garan wixii Ilaah kuu sameeyey? Dad badan oo naga mid ah, anigu ka mid ahay, aan dareen ku filan oo ku saabsan wacdinta, maxaa yeelay, waxaannu aadan mahadisaan filan in aan helno inay fiirsadaan at ammaanta Ilaah Injiilka. Haddii aynu ku dheeraad ah qabsaday, iyo kooxaha waweyn ee aannu Ilaahayo iyo waxa aan ku leenahay Masiixa, waxaan u sheegi doono dadka kale. Waxaan u sheeg oo ku saabsan bandhigyada waxaan jeclaan, iyo albums wanaagsan, iyo shirarka. Ma waxaan u sheeg wax Ciise ku saabsan? Markii aan jeclahay wax, aan lagu caawin karaa laakiin dadka wax la wadaag.
Christian, faa'idaystaan ​​waxa Ilaah sameeyey. naftaada qoo Injiil in, laakiin Ilaah ayaa weli muujinaya Ammaantiisu off waxaa, in wajiga of Masiix. Waxa aanu joojin marka aad isaga ku kalsoon tahay. Ha isku dayin in ay u guuraan ee la soo dhaafay Injiil! Waa halka aan ugu cad u arki ammaanta Ilaah. Waa waxa oo dhan Kitaabka noo tilmaamay in.
Sidee Ilaah ku murmi Cilmi jacaylkiisa inoo on. Ilaah maal nimcadiisa inagu soo degtay. Ilaah soo bandhigay samir nala. Ilaah qudhiisu waa muujinaya off. nin u jeeda la soo celiyay Blind kuma socdaan hareeraha la blindfolds. Waxaad indhaha. Sidaas eegto.
Marka aad niyad, xusuuso kuwa aad u adeegaya. Ka dhig ku wacdiyaya Injiil. Waxaan ku wacdinnaa Masiix oo sidaas dadka u arki karaan ammaan.
Wasaaradda in this dunida dhacday madow weligii, mana jiri doonto weligeed fudud. Laakiin waxaan ka baran karaa ka Paul. Waxaan ku baran kartaa, ugu horeysay, ma inay kacafin sababta oo ah diidmada dadka. labaad, Iska jira oo Camal Shaydaana ee. saddexaad, in ay qaataan shuqulkii wasiirka. afraad, inay sii rajeeyaan in shuqulkii Ilaah.
Maxaan sameeyaa haddii aan ma ku wacdiyaya Injiilka sida ugu badan ama sida aan waa in? Ma rabtaa in aad in uu ka tago iyada niyad. Fiiri in Masiix. Waxaan doonayaa in aad ka tago halkan lagu dhiirigelinayaa, waxa Ilaah kuu sameeyey waayo, Ciise. Oo dano dad kale u sheego si la mid ah ayay la kulmi karaan.
Waxaa aad u badan waa at saamiga noo socdaan dareen xun Waayo, qudheenna. Aad u badan oo khatar ku jirta.
Waxaa jira fursado noo laba kaliya marka ka badan noloshanu. Kuwa naga mid ah oo aan gelin rumaysadka Masiixa, halligmi doonaan. Haddii aan u beddeli doonaa maskaxdeena ku saabsan dembiga, tago, iyo Tuur nafteena on naxariista Ciise, aynu adkaysanno burburinta doonaa weligiis.
Laakiin haddii aynu soo noqdaan oo ay isku halleeya Masiixa, waxaan ka heli si aad u aragto bidhaamaysa Ammaantiisu waxay hadda Injiilka Masiix. Oo ka dib, ka dib markii uu soo laabtay, oo dhan oo naga mid ah heli doonaan jidh cusub. Oo waxaannu fiirsadaan doonaa Ammaantiisu waxay si buuxda, weligeedba. Taasi waa ammaanta badan. Waxaa jira wax badan oo khatar ku jirta. Ka dhig ku wacdiyaya Injiil si nin weligiis arki kartaa ammaanta Ilaah.
Jared Duba • August 22, 2013 at 1:55 pm • Reply
Waxaan ahaa at Legacy iyo maqlay aad fariin this ku wacdiyaan. run ahaantii aan ka mahadnaqayo xooga on Wacdin oo waxaa lagu dhiirigelinayaa in dadka waawayn ay si badan lagu soo bandhigi in ay. Waxaa sidoo kale lagu helay iyo dhismo naftayda shakhsi. Thanks, Bro!
Jay • August 22, 2013 at 8:35 pm • Reply
Xasuuso dadka Masiixiyiinta ah ee bilaa guryaha Waan idiin sheegay guys ku saabsan? Waxay u baahan yihiin caawimo.. caawimaad kasta noqon lahaa guys weyn. Ilaah ku siin doonaa, laakiin Ciise ma uu samayn karin shuqullada meeshaas oo rumaysad u lahayn. Qof kasta oo LA waxaa dhabarka u sababta oo ah la'aanta of iimaanka. Firkradahaan taageero boqortooyada oo la siiyo waxa aan awoodno. Waxa kale oo ay samayn music iyo Ruuxa run ahaantii ku hadla ee lyrics ay. Firkradahaan faafin in sidoo! Waxaan arrintan loo sameeyo, waayo, boqortooyada y'all. Email livin4christ4lyfe@gmail.com .. Halkaan hoose ka caawin walaalihii. aad oo dhan jeclaada. Oo Trip, fadlan caawiyo.. Haddii aad rabto in ay midho arko.. Fiiri YouTube.com/livin4christ4lyfe ..
PJMadsen • August 23, 2013 at 4:43 waxaan ahay • Reply
Wow! Taasi waxay ahayd run ahaantii wanaagsan! Ma sugi karo in ay saaxiibbadayda la wadaagto! Mahadsanid! runtii waxaan jeclaan in aad wax u maqli karo iyo waxa ay u arkaan on youtube…iyo sidoo kale ka akhrisan khudbada sida Trip Lee waxa ay sheegtay in ay Dareeri Dhexdeeda video ah! “Ilaah waa ina barakayn qof kasta.”
Xusuuso: Oh u preachin' hadda? @ TripLee116 eraygii in tacsida wuxuu keenaa ... - UrbanGospelEntertainment.com @UrbanGospelENT
Shauneil • August 23, 2013 at 8:22 pm • Reply
fariin u fiican. Well qoraal ah iyo sharaxaad ku waa mid fudud. Xaggee ku qori button? Ma doonayo in ay u wad dhex pages oo dhan ayaan si aad u ogaato post. :-) Waan ku seegi laga yaabaa in.
SdoubleU • August 24, 2013 at 6:14 pm • Reply
Thanks for fariin this. Waxa ay ahayd wax run ahaantii waxaan loo baahan yahay in la maqlo. Website-kani waxa uu ahaa dhiirigelin weyn ii. Ilaah ammaan!
Amarie • August 25, 2013 at 9:02 waxaan ahay • Reply
Waxaan looooooooooooove shaah qabow littir! ;-)
DJ • September 11, 2013 at 6:43 pm • Reply
I, Trip! dude Thanks! Your fariin dhab ah ii dib-u-u waxyoonay. Waxaan si niyad waayadan iyo tan kaliya ka caawiyay.
daahyada la deggan yahay • July 23, 2019 at 7:07 waxaan ahay • Reply
jeclaan lahaa inuu u arkay in iftiinka qoraxda.